Toro-hevitra Travel Metro any Astoria sy Long Island City
Fialan-tsasatry ny Metro any Astoria sy Long Island City
Fialam-boly mahazatra amin'ny làlan-dàlana ambanin'ny tany sy avo lenta any Queens-Western Queens
Ny iray amin'ireo zava-bita tsara indrindra ao New York dia rafitra ambanin'ny lalana izay mandeha manerana ny tanàna 24 ora isan'andro. Ny Queens dia sariaka mba hanana andalana maromaro mihazakazaka amin'izany, avy amin'ny "International Express" izay fiaran-dalamby 7, mankany amin'ny hany lamasinina izay tsy miditra ao Manhattan, ny G.
Ny fiarandalamby dia somary madio ary ny graffiti dia tsy olana betsaka intsony (na dia izany aza), ary ireo New York vitsy an'isa tsy manan-kialofana dia mbola mampiasa ny metro ho toeram-ponenana vonjimaika.
Ny fiarandalamby vao haingana dia mihaona amin'ny ankamaroan'ny andalana any Queens, afa-tsy ny 7 sy ny R (indraindray). Ireo fiarandalamby vaovao ireo dia manana famakiana dizitaly manamarika ny toeram-piantsonana, ny seza ben'ny, ary ny filazana mialoha izay voarakitra an-tserasera tsirairay izay mazava sy mora takarina.
Ny Metrocard no fomba voalohany handoavana karama amin'izao andro izao, koa. Tsy misy ny tsipika intsony.
Subway Lines any Western Queens
Astoria sy LIC dia matetika mifandray amin'ny N sy ny fiaran-dalamby 7, saingy misy tsipika enina maromaro maromaro mandeha eny amin'ny faritra. Ireo andaniny metro manaraka dia farafahakeliny toeram-piantsonana iray any Astoria sy Long Island City:
N / Q avy any Queensboro Plaza mankany Ditmars Blvd
Anisan'ny toerana misy an'i Queensboro Plaza, faha-39, faha-36, Broadway, 30 av, Astoria Blvd, Ditmars Blvd.
Ny N / Q dia nasandratra tamin'ny Astoria.
Ny Queensboro Plaza, ny Astoria Blvd, ary Ditmars dia fijanonana.
R avy any Queens Plaza ka hatramin'ny 46th St
Anisan'ny toeram-piantsonana ny Queens Plaza, 36th St, Steinway, 46th St
Ny R dia any ambanin'ny tany ao Astoria
Queens Plaza dia fijanonana mivantana.
E / M from 23rd St / Ely to 46th St
23rd St / Ely, Queens Plaza, 36th St, Steinway, 46th St
Ny E / M dia eny ambanin'ny tany ao Astoria
Queens Plaza sy 23rd Street dia mijanona.
7 avy ao Vernon / Jackson ka hatrany Queensboro Plaza
Vernon / Jackson, Hunters Point, kianjan'ny kianja, Queensboro Plaza.
Ny 7 dia ambany sy ambony any Long Island City
Ny fijanonan'ny LIC rehetra dia fijanonana manaparitaka.
F amin'ny 21st Street Queensbridge
Ny F dia ambanin'ny tany Astoria
Ny fijanonan'ny Street 21st dia fijanonana mivantana ary koa fiantsonana azo tsidihana
G avy amin'ny faha-21 ta ho any amin'ny Kianja Court
G ambanin'ny tany ao Astoria
Ny fijanonana rehetra dia fijanonana maneho.
Famindrana ao anatin'ny rafitra Subway
Ny fampitaovana dia mahatonga ny mpitaingina hifindra eo amin'ny sehatry ny metro. Ireo teboka famindrana ireo dia mamela anao hanao izany:
Fandefasana eo anelanelan'ny 7 sy N / Q ao Queensboro Plaza
Famindrana eo amin'ny G sy 7 eo amin'ny Kianjan'ny Court - vaovao ary nanatsara ny taona 2011
Misy ny fifindra-dàlana eo amin'ny G sy E / M, ary eo anelanelan'ny 7 sy E / M eo amin'ny Kianjan'ny Court sy 23rd St / Ely
Azonao atao ihany koa ny "mandefitra" eo anelanelan'ny Queensboro Plaza sy Queens Plaza amin'ny alàlan'ny fandaozana ny rafitra, mandeha an-tongotra vitsivitsy, ary miverina miditra amin'ny rafitra. Izany dia mitaky fandoavana farafaharatsiny roa raha toa ka mampiasa zavatra hafa afa-tsy Metrocard tsy voafetra, fa mety ho tsara kokoa noho ny miditra ao an-tanàna izany ary hiverina indray.
Fandefasana fanampiana fanampiny dia ahitana ny fitazonana ny bus M60 ao amin'ny Astoria Blvd mba hahatongavana any amin'ny seranam-piaramanidin'i LaGuardia na Harlem. Azonao atao koa ny manantona ny LIRR any Hunters Point (ora maromaro).
Aiza no hahitana fiovana sy fampandrenesana fanompoana
Ny ampahan'ny fiainana misy rafitra metro 24 ora dia ny hoe tsy misy ny fotoana voajanahary rehefa ny asa sy ny fiarovana dia azo atao eo amin'ny tsipika.
Noho izany, ny fiovan'ny asa fanompoana dia alamina mialoha. Ny fiovana eo amin'ny serivisy dia afaka manamboatra endrika maromaro: fiara fitateram-bahoaka no hanolo ny ampahan'ny tsipika iray, ny fijanonan'ny fiaramanidina, na ny fiaran-dalamby dia handeha amin'ny andalana izay tsy azy manokana (mitranga amin'ny R mihoatra noho ny andalana hafa).
Azonao atao ny mahita fanambarana momba ny fanovana eo amin'ny serivisy ao amin'ny pejin'ny adiresy Service MTA ary koa ao amin'ny tranokala Straphangers. Azonao atao koa ny mandray fanovana sy fampandrenesana amin'ny serivisy amin'ny alàlan'ny SMS na mailaka amin'ny alàlan'ny MTA Email sy Text Message Alert System. Amin'ny famoronana kaonty, afaka mametraka hafatra mailaka sy hafatra avy amin'ny MTA momba ny toro-hevitra sy ny fampandrenesana. Afaka manajanona ny fampandrenesana ianao mandritra ny vakansinao ary averina indray mandeha indray rehefa miverina. Fanompoana lehibe izany.
Ny fampitandremana sy ny fiovana amin'ny serivisy dia azo alaina amin'ny alàlan'ny twitter - ny seranam-piaramanidina R, N, Q, 7, E, M, F, ary G rehetra dia natsangana avy hatrany hanaraka ny toro-hevitra sy ny fampandrenesana avy amin'ny MTA.
Ankoatra izany, ny fiovan'ny serivisy novolavolaina dia naseho tao amin'ny fiantsonan'ny fiara fitateram
Fantaro fa indraindray dia tsy misy fotoana hanambarana fanambarana momba ny fiovan'ny serivisy, ary mahagaga foana izany. Ny fiovan'ny serivisy mahazendana mahazatra dia rehefa ny Express N / Q dia maneho ny Queensboro Plaza sy Ditmars Blvd. Matetika no mitranga izany rehefa mihazakazaka ny fiarandalamby ary mihemotra mandritra ny ora maivana.
Maps sy Directions
Tena manampy tokoa ny mahita ny sari-tanin'ilay rafitra izay ezahanao hivezivezy. Google Maps dia manana fampahalalam-baovao be dia be ao amin'ny sarintany, ary mazava ho azy fa manana ny sarintany ao amin'ny metro ao amin'ny aterineto ihany ny MTA. Ary raha azonao atao ny mamantatra zavatra maro amin'ny fijerena sarintany iray fotsiny, indraindray mila fanampiana kely amin'ny torolàlana ianao indraindray. Eto no misy ny fidirana ao amin'ny Google Transit sy Hop. Ny roa dia afaka manome anao ny varavarana fidirana an-dàlam-pandehanana, ary azo jerena ao amin'ny findainao.
Soso-kevitra amin'ny Metro sy ny fijanonana tsara indrindra
Ny Stop The Ditmars Blvd dia iray amin'ireo tsara indrindra , ary ianao dia sambatra raha toa ka fijanonanao izany. Izy io dia fijanonana mivantana ary eo amin'ny faran'ny tsipika, izay midika hoe raha manonona tampoka ilay fiaran-dalamby, tsy ho tapitra ny fijanonanao. Ankoatra izany, amin'ny toetr'andro mafana sy mangatsiaka, dia miandry amin'ny toetr'andro mampiadana ianao fa tsy mangatsiaka na miorina ivelany. Ankoatra izany, ianao dia efa mipetraka foana mandritra ny maraina mangirangirana, satria io no fijanonana voalohany.
Queensboro sy Queens Plaza dia azo antoka ihany koa raha toa ka miresaka tampoka ny fiaran-dalamby, satria izy roa ireo dia samy miditra amin'ny seranan-tsambo ary ny fiarandalamby rehetra mijanona ao, maneho na tsia.
Ny fiainana akaikin'ny Broadway sy ny faha-34 dia manome anao ny fidirana amin'ny andalana N / Q sy E / M / R.
Amin'ny ririnina, indrindra eo amin'ny tsipika avo indrindra , dia mety ho tena mamitaka ny tohatra. Ny mpiara-miasa dia tokony hisolo ny tohatra, fa tsy mitranga foana izany, na mety tsy hitranga indraindray. Noho izany dia afaka mihazakazaka ny tohatra. Raha toa ka tsy milevina tsara ny tohatra, dia afaka mihelina ihany koa izy ireo. Koa mitandrema tsara.
Wifi Location Directory
Fihetseham-po mahatsikaiky momba ny Tetezan'i Brooklyn
Taom-baovao tao New York: Ahoana ary aiza no hahazoanao MetroCard Free, na $ 15 ho an'ny Cab
10 NYC Boat Trips izay ho tia ny toerana misy azy
Ny midi-maso midina midina midina midadasika ao Lincoln Center
Aiza no hisy Mac sy Cheese ao Toronto
Fiarandalamby amin'ny fiompiana omby ao Puerto Rico
Ahoana no hanoratanao ny fianarana mahomby amin'ny fialamboly bisy
Faha-efatra amin'ny volana jolay any Kalifornia
Top 10 sakafo ara-tsakafo sy fivarotam-bokatra ao DC
Inona ny Weddingmoon?
Midira ho an'ny mailaka MTA / LIRR maimaim-poana & Hafatra Alakamisy
Fialam-boly miadana amin'ny any New York
Metrocenter, Toeram-pivarotana iray any Indio any Phoenix Andrefana
Torohevitra lehibe ho an'ny fitsangatsanganana ao Eoropa